Izindaba - I-Ge 9ha.02 turbine yegesi ifakwe ngempumelelo kwezentengiselwano okokuqala ngqa emthonjeni kagesi we-track 4A eMalaysia
I-ge 9ha.02 turbine yegesi ifakwe ngempumelelo ekusebenzeni kwezohwebo okokuqala ngqa emthonjeni wamandla kagesi we-track 4A eMalaysia
Isitshalo samandla esihlanganisiwe se-SPG 1,440MW seTrack 4A eMalaysia senziwe ngempumelelo ukuhweba. Lesi yisikhungo sokuqala samandla womjikelezo esihlanganisiwe esingu-9HA.02 esizosebenza.
I-GE ihlinzeka ngezitshalo zamandla ngezikhungo ze-HA ezisezingeni eliphakathi nendawo zokukhiqizwa kwamandla womjikelezo kanye nezinsizakalo ezihlanganisa wonke umjikelezo wempilo wezimpahla zazo zamandla, kufaka phakathi imishini yokukhiqiza ugesi, izixazululo zedijithali nezivumelwano zesevisi.
Ngobuchwepheshe obuhamba phambili be-GE HA-class gas turbine technology, amandla okuphehla ugesi we-Track 4A plant angahlangabezana nezidingo zikagesi zemindeni elinganiselwa ezigidini ezi-3 zaseMalaysia.
IMalaysia, uJohor-Febhuwari 24, 2021, iGeneral Electric (ngemuva kwalokhu ezobizwa nge- “GE”), i-CTCI Zhongding neSouthern Power Sdn Bhd (ngemuva kwalokhu ebizwa nge- “SPG”) imemezele ngokuhlanganyela ukuthi itholakala ePasir Gudang, Johor, Malaysia. Isikhungo samandla kagesi i-SPG Track 4A sisetshenziswe ngempumelelo ukuhweba namhlanje. Lesi sitshalo samandla kagesi esihlanganiswa nomjikelezo esihlanganisiwe esingu-1,440MW yisikhungo sokuqala samandla kagesi esikhishwe ngegesi se-GE 9HA.02 ukufeza ukusebenza kwezebhizinisi. I-turbine eyodwa yomusi, i-generator eyodwa ne-boiler eyodwa yokushisa imfucuza. Ngaphezu kwalokho, iplanti ephehla ugesi isayine isivumelwano seminyaka engama-21 sesevisi yesikhathi eside ne-GE. I-GE izoyinikeza ngezinsizakalo nezixazululo zedijithali ukusiza isizinda samandla sithuthukise ukubonakala kwempahla yayo, ukuthembeka nokutholakala kwayo. Ukuphehlwa kwamandla kagesi we-Track 4A kulindeleke ukuthi kube Ukuhlangabezana nesidingo sikagesi semindeni elinganiselwa ezigidini ezi-3 zaseMalaysia.
I-GE izohlinzeka izitshalo zamandla ngohlu olugcwele lwezixazululo zedijithali, izinsizakalo zokuthuthukisa izitshalo zamandla, kanye nokuhlolwa okuphelele kwemishini nezinsizakalo zokubonisana ngobuchwepheshe ze-9HA.02 turbine yegesi. Isoftware ye-GE Digital's Predix * yokuphathwa kokusebenza kwempahla i-APM izoqapha ukusebenza kukonke kwesikhungo sokuphehla ugesi, isize isitshalo samandla ukuthi sithuthukise ukubonwa kwempahla yaso, ukuthembeka nokutholakala kwaso, ngenkathi sinciphisa izindleko zokusebenza nezokugcinwa kwayo. Ngaphezu kwalokho, imishini yokutshala amandla kagesi ifakwe izinzwa, kanti isikhungo se-GE Monitoring and Diagnosis (M&D) eKuala Lumpur sizobheka futhi sihlaziye imininingwane eqoqwe izinzwa ubusuku nemini.
“I-GE iba sesikhundleni sokuqala kumthamo ophelele ofakiwe wogesi abaphehlwa ugesi eMalaysia, futhi isiqongelele iminyaka engaphezu kwengu-40 yesipiliyoni sokusebenza esicebile. Ngosizo lwayo oluyingqayizivele, i-GE izoqhubeka nokusiza ukuhlangabezana nezidingo ezikhulayo zikagesi wendawo eMalaysia. ” UMongameli weGE Power Power Asia kanye noMphathi Omkhulu Ophethe uRamesh Singaram bathe. “Ngalesi sikhathi i-GE 9HA.02 turbine kagesi ithole ngempumelelo umsebenzi wokuqala wezentengiselwano eMalaysia, okukhomba enye impumelelo enkulu yophiko lwe-HA-class. Ngobuchwepheshe bamuva, izinsizakalo nezixazululo zedijithali, i-GE izohlinzeka iMalaysia ngokuthembeka okukhulu. , Izinsizakalo zokukhiqiza ugesi eziguqukayo. ”
Mayelana noGE Power Power Generation
IGE Power Power ingumholi embonini yamandla omhlaba, ihlinzeka ngezixazululo zobuchwepheshe ezigcwele zamanani nezinsizakalo kusuka ekukhiqizeni ugesi kuye ekusetshenzisweni, ngobuchwepheshe obusezingeni lomhlaba jikelele: imishini yokuphehla ugesi, amajeneretha, ukukhiqiza okungeziwe, ukukhiqizwa kwamandla kagesi, izixazululo zohlelo, Izinsizakalo nezixazululo ezibanzi zezitshalo. Sinamandla amakhulu afakwe emhlabeni wonke ophehlwa ugesi, anamahora angaphezu kwezigidi ezingama-600 okusebenza. Ukukhiqizwa kwamandla kagesi we-GE kuyaqhubeka nokusungula futhi kusebenza namakhasimende ukuthuthukisa ubuchwepheshe bezamandla ezizayo ukwenza ngcono inethiwekhi yokukhiqiza amandla okuhlala kuyo abantu.